Akwụkwọ Jason Cottrell na Martech Zone |
Edemede site na Jason Cottrell
Jason Cottrell bụ onye guzobere na CEO nke Myplanet, ihe eji eme ihe eji eme software nke n’emeputa ihe omuma dijitalụ maka ndị na-ere ahịa omnichannel, ụlọ ọrụ ecommerce, telecom, nri, na ụdị ahịa ụwa ndị ọzọ.
Composable: elinyefe Nkwa nke Onwe
Nkwa nke ịhazi onwe gị adaala. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị na-anụ maka uru dị egwu ọ na-aba, ndị ahịa na-achọ ịbawanye uru na ya zụrụ ihe ngwọta dị oke ọnụ na nke teknụzụ, naanị iji chọpụta na oge na-adịghị anya, maka ọtụtụ, nkwa nke ịhazi onwe ya dị obere karịa anwụrụ ọkụ na enyo. Nsogbu na-amalite site na otu esi elele anya nkeonwe. Etinyere ya dịka azịza azụmaahịa, edobere ya site na oghere nke idozi mkpa azụmahịa mgbe ọ dị n'ezie